यस्तो एप जसले बताउँछ मृत्यु कसरि आउँछ? - E Net Nepal
Home Technology यस्तो एप जसले बताउँछ मृत्यु कसरि आउँछ?
यस्तो एप जसले बताउँछ मृत्यु कसरि आउँछ?
E NET NEPAL 11:36 PM Technology,
मान्नुस नमान्नुस प्रविधिको विकासले तपाईको जीवनमा केहि न केहि परिवर्तन ल्याएकै छ र ल्याउने नै छ। प्रविधिकै कमालको अविस्कारक स्मार्टफोनले तपाई हामी सबैको जिन्दगीलाई यसैसंग निर्भर बनाउदै लागेको छ। चाहे फोनमा कुरा गर्न परोस, चाहे बिहान चांडै उठ्न अलार्म चाहियोस या त कुनै बिशेष दिन वा काम सम्झनु परोस, अथवा क्यालकुलेटर चाहियोस कि घडी सबै स्मार्टफोनमा हुने हुनाले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुले स्मार्टफोनबिनाको जिन्दगि अधुरो ठान्नु स्वाभाविक भैसक्यो। स्मार्टफोनका निमित्त त्यस्ता धेरै एप्स बनिसकेका छन् जो तपाईहाम्रा काममा आउन सक्छन। केहि खास एप्सले हाम्रो कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने देखि भविश्यवाणी गर्नेसम्मका कार्यहरुमा पनि मद्दत गर्छन।
स्मार्टफोनका निमित्त निर्मित एप्स साँच्चै नै अनौठा पनि छन्, जुन एकदमै रोचक लग्न सक्छ। यस्तै खालको अनौठो एप्स हो 'Death'। यो पढेर केहि व्यक्तिहरु डराउनु पनि भयो होला तर यो एप डराउनुपर्ने खालको छैन यो कति उपयोगी र रोचक छ भन्ने कुरा हामी बताउन गइरहेका छौं।
यो एपले तपाईको एरियामा यदि कुनै मर्डर भयो वा कुनै हत्या भयो वा एक्सिडेन्टमा कसैको मृत्यु भयो भने यसले तपाईलाई जानकारी दिन्छ। बास्तवमा भन्नु पर्दा यो एक किसिमको ट्रयाकिंग एप हो। तपाईको इलाकामा यदि कुनै हत्या वा मर्डर सम्बन्धी घटना घट्यो भने यसले यस्ता घटनाहरुको डाटाबेस निर्माण गर्छ र तपाईलाई जानकारी दिन्छ। यो एप आफसेआफ अपडेट हुन्छ।
यो एपले तपाईको एरियामा मृत्यु कति सजिलै र कसरि आउन सक्छ भन्ने कुरा यो एपले बताउँछ। यदि घरबाट बाहिर निस्कने बेलामा अगाडिको बाटोमा हत्या भएको छ भने तपाई बाटो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपले तपाईलाई आफ्नो वरपरको रोडमा कहाँ कस्तो किसिमको एक्सिडेन्ट बढि हुन्छ र कसरि त्यसलाई टार्ने भन्ने बारेमा सचेत पनि गराउछ। किनकि एक्सिडेन्ट हुने ठाउँको बारेमा थाहा पाएपछी तपाई त्यो बाटो हिंड्दा सावधानी अपनाउनु हुन्छ।
तपाई पनि यो एपलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो एप डाउनलोड गर्न कयौं स्टेपहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप खासगरी बच्चाहरुको लागि त हुँदै हैन।
यो एप खाली ब्रिटेनमा मात्र चल्छ किनकि यसले केवल गूगलम्यापको आधारमा घटनाको रेकर्ड राख्ने गर्छ। यदि तपाई ब्रिटेनमा हुनुहुन्छ भने यो एप डाउनलोड गरेर चलाउन नभुल्नुहोला।
By E NET NEPAL at 11:36 PM